Olee otú iji tọghata na Play Music on iPod
> Resource> iPod> Olee otú iji tọghata na Play Music on iPod
Songs na koodu nke M4A, MP3, AIF, WAV, M4B na M4R nwere ike na-egwuri na gị iPod. Ma, ndị ọzọ gụnyere OGG, AAC na WMA bụ na-emegide iPod. Ọ bụrụ na ị nwetara nza nke songs na-enweghị omume enyi formats, olee otú ị na-egwu ha na gị na iPod?
Na nke a, ị ga-mma na-agbalị a thrid ọzọ software, dị ka Wondershare TunesGo (n'ihi na Windows ọrụ) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac). Nke a software-enyere gị aka tọghata ma nyefee ọ bụla kedi music formats ka iPod enyi na enyi n'anya. Mgbe ahụ, ị nwere ike ịkpọọ egwu na iPod kpam kpam. Ke adianade do, ọ na-enye gị ka ị na-egwu iPod music na dị iche iche kọmputa.
Download a software na-agbalị ndu n'okpuru.
Cheta na: The Wondershare TunesGo bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na iPod ịkpọgharịa, iPod nano, iPod kpochapụwo na iPod aka. Get nkọwa ndị ọzọ maka iPod ụdị. Otú ọ dị, Wondershare TunesGo (Mac) arụ ọrụ nke ọma na iPod aka 5/4 na-agba ọsọ iOS 8, ​​iOS 7, iOS 6, iOS 5 nakwa dị ka ọhụrụ tọhapụrụ iOS 9.
Ụzọ dị mfe iji tọghata na-egwu music si iPod
Na mmalite, wụnye na-agba ọsọ a software na gị Windows kọmputa ma ọ bụ Mac. Ebe a, ka ịrụ ndị nkuzi na Windows version.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iPod na kọmputa
Nke a software arụ ọrụ zuru okè site USB tethering. N'ihi ya, jiri eriri USB na-iPod na kọmputa ejikọrọ. Nke a software ga ngwa ngwa ịchọpụta iPod. Mgbe ahụ, ọ ga-egosipụta gị iPod data gụnyere music, videos na foto na ekpe sidebar.
Nzọụkwụ 2. iPod play music
Na-aga "Media" ke hapụrụ sidebar. Site ndabara, music window-egosi na n'elu na nri ebi ndụ. Bụrụ na ọ bụghị, pịa "Music" n'elu akara. Pịa "Tinye" wee na-agagharị na kọmputa gị na mmapụta faịlụ Chọgharịa window. Chọta gị chọrọ music faịlụ na pịa "Open" nyefee ha. Ọ bụrụ na ị na-enweta a ozi-agwa gị na ndị a music faịlụ-apụghị egwuri na iPod, pịa "Ee". Mgbe ahụ, nke a software ga-tọghata ha ka ha na songs na koodu nke MP3.
Gịnị ma ọ bụrụ na ị chọrọ na-egwu music faịlụ site na iTunes ma achọghị wepụ niile ugbu a songs on iPod site syncing? Ọ dị mfe. Pịa "Playlist" na-egosi na playlist window. Pịa obere triangle n'okpuru "Tinye" na "Tinye iTunes Ndetuta egwu ọkpụkpọ". Na-esonụ window, nanị nne Mmetụta gị chọrọ listi ọkpụkpọ. Mgbe ahụ, pịa "OK".
Ugbu a, ị converted ma wega music gị iPod. Enweta "Music" na iPod na-egwu music.
E wezụga na-akpọ music si iPod, na ị na-ike igwu egwu iPod music na dị iche iche kọmputa. Mgbe ahụ, wụnye TunesGo na kọmputa na nke ị ga-achọ na-egwu iPod music. Ekem, ke music window, ịhọrọ songs na ị na-ekpebi na na na na kọmputa. Na pịa abịazi nọdụ triangle n'okpuru "Export ka". Mgbe ahụ, 2 họrọ-egosi: "Mbupụ na My Computer" na "Mbupụ na iTunes Library". Pịa otu ịzọpụta songs on iTunes ọ bụ otu nchekwa na kọmputa.
Cheta na: Nyefee listi ọkpụkpọ site na iTunes ka iPod bụ nanị dị mgbe ị na-eji Windows version.
Otú na-ekiri ihe nkiri na iPod aka
Ụzọ dị mfe iji Hazie Music on iPod
2 Mfe Ụzọ Nyefee Music si iPod ka iTunes
Olee otú Naghachi Songs si iPod Omuma
Otú nyefee Music si iPod nano ka Computer
Olee otú undelete iPod aka Videos
Olee Otú Ị Pụrụ Nyefee Music, videos na foto site na kọmputa na-iPod